Ambassador of Myanmar Presents his Credentials to the President of Turkey – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Ambassador of Myanmar Presents his Credentials to the President of Turkey
Thura U Thet Oo Maung, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Turkey, presented his Credentials to His Excellency Mr. Abdullah Gul, President of the Republic of Turkey, on 13 November 2013, in Ankara.
Dated. 20 November 2013
တူရကီသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး သူရဦးသက်ဦးမောင်သည် ၎င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အင်ကာရာမြို့၌ တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ၊ သမ္မတ မစ္စတာ အဗ္ဗဒူလာ ဂူးလ် ထံပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်